Sh.Shariif oo xaley oo dhan habeen socod & kormeer ku marey Muqdisho+SAWIRO – SBC
Sh.Shariif oo xaley oo dhan habeen socod & kormeer ku marey Muqdisho+SAWIRO
Posted by editor on March 21, 2012 Comments
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hurdo ladin habeenimadii xaley isagoo guure iyo socod habeenimo ku soo kala bixiyey qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimada ah gaar ahaan fariisimada ay ku sugan yihiin ciidamadiisa.
Sheekha oo tuute ku labisan ayaa socodkiisa saq dhexe socodka ah wuxuu bilaabay 1-dii habeenimo isagoo ka bilaabay Isgoyska KM4, wuxuu uga sii gudbbay Tarbuunka, isagoo uga sii talaabay Isgoysyada Hawl-wadaag, Cali Kamiin, Siinaay, Afarta Jardiino, Sanca, Fagax Warshada Baastada.
Goobaha uu booqdey madaxweynaha ayuu wuxuu kula kulmay saraakiisha ciidamada dawlada isagoo ka dhageystey warbixino ku aadan xaaladaha aagaga ay ku sugan yihiin, sida ay u socdaan hawlaha dib u soo celinta amaanka caasimada & warbixino kale oo la xiriira ciidamada.
Kormeerka guure socodka ahee uu madaxweynuhu sameeyey ayaa waxaa ku wehliyey wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka C/samad Macalin Maxamuud & saraakiil ka tirsan ciidamada dawlada gaar ahaan kuwa xooga dalka.
Ujeedada kormeerka Sheekh Shariif ayaa lagu tilmaamay inay aheyd mid uu ugu kuurgalayey sida ay socoto hawlaha ciidaamda iyadoo wararku sheegayaan in ay soo gaareen warar sheegaya habacsanaan ku aadan sida ay amaanka u sugayaan ciidamada dawlada kuwaasi oo la sheegay in xiliyada habeenkii ah ay jilicsan tahay habka ay amaanka u sugaan.
Socdaalka Sheekh Shariif ayaa ku soo beegmaya iyadoo labadii habeen ee ugu dambeysay xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho ee Villa Somalia duqeyn lagu bartilmaameystey taasi oo ay wax ku noqdeen dad rayid ah, waana mida keentey in Sheekh Shariif uu aad uga caroodo habka amaan sugida ciidamada dawlada.
Madaxweynaha ayaana Ciidamada ku gubaabiyay sidii ee wax uga badali lahaayeen qaabka ee hada u sugaan amaanka loogana baahna yahya in ee adkeeyaan amaanka isagoona si aad u u amaanay hawlihii ay soo qabteen ee ku aadanaa xoreynta magaalada Muqdisho.
Mukhtaar Garowe says:
Waxaasa Madaxweyne Lagaa dhahaa
hmmmm! cajiib lknse hanbalyo ayay mudantahay taasi!
Aad baan ugu faraxsanahay.Qof kasta waa inuu dareemaa in hadii aanu shaqadiisa qabsan in shaqala’aan ku dhici garto. Adoo iska jiifta argagixisadana ay shaqadooda wataan xaq maaha. Dadkaan labaatan sano dowlad ma arkin marka dicipline dhan maleh. Taasaa keentay bay ilatahay in M/waynuhu uu cadaadis saaro. Good job Mr. Presdident. MY Allah be with you.
wa geesi madaxweyne sh.shariif waxaa hubaal ah ciidamada qaranku inaysan si fican waajibaadkooda u gudan sababtoo ah mar an dhawayn waxa la shaciyey in muqdisho laga xoreyey khawaarijta hadana in habeen walba madaxtooyada la duqeeyo iskada meel kale wa habacsanan dhanka ciidanka ah ciidanku dicipline iyo activity wa ibn ay ka muuqata hawshoodana ay gutaan si wadanka loo xooreyo.